Ngifuna Dala i-akhawunti ye-Outlook? Khona-ke lesi sihloko ikunikeza inqubo okuphelele Ngena ngemvume-Akhawunti Up Outlook. Zikhona izinzuzo eziningi Uyithola usebenzisa le-akhawunti ye-Outlook, ngakho mina asikisela kokudala i-Akhawunti yakho siqu Outlook.
Lesi sihloko engimdalele nge izinyathelo ezilula futhi kulula. Wena ubuye uthole website esemthethweni isixhumanisi lapha, ukuze uthole lonke ulwazi endaweni eyodwa. Landela igxathu negxathu nqubo futhi awuqede njengoba kushiwo ngempumelelo Dala i-akhawunti yakho ye-Outlook.
Ngakho, kufanele uzibheke lonke lokhu okuthunyelwe ngokucophelela kusukela phezulu kuya phansi. Bese ulandela izinyathelo Dala i-akhawunti ye-Outlook kalula. Kukhona ezinye izidingo eziyisisekelo lapho kufanele banakekele ngaphambi kokuqala lokhu Bhalisa inqubo.
I-Microsoft Outlook kuyinto siqu umphathi ulwazi olutholakala njengengxenye suite-Microsoft Office. It is ikakhulukazi livame ukusetshenziswa njengenhlangano lokusebenza lwe-imeyili. Lihlanganisa ikhalenda, umphathi wokusebenza, umphathi contact, inothi ukuthatha, iphephabhuku, futhi okuphequlula iwebhu.
Yiziphi izici uthola emva ngokudala i -Akhawunti ye-Outlook? Ngakho, hlola Ukukhuluma ngezansi 5 izici zakamuva Uyithola usebenzisa le-akhawunti ye-Outlook.
Kungcono Ukuphathwa Umhlangano
Kungcono Isikhathi-zone Management
bcc Better Management
Dala i-akhawunti ye-Outlook | Isinyathelo by Isinyathelo Inqubo
Landela izinyathelo yisho ngezansi ngempumelelo Outlook Bhalisa. Sebenzisa olusemthethweni iwebhusayithi isixhumanisi ezishiwo izinyathelo ngqo faka website esemthethweni.
Chofoza esinikeziwe Outlook olusemthethweni iwebhusayithi isixhumanisi: www.outlook.com
Manje, chofoza inketho “Dala i-akhawunti khulula” ukuqala Ngena ngemvume inqubo.
Kuleli khasi, kufanele ufake i-imeyili okusha futhi ukhethe domain @ outlook.com noma @ hotmail.com bese ucindezela “Olandelayo”.
Ngemva kwalokho, faka iphasiwedi ozikhethele bese ucindezela “Olandelayo” inkinobho.
Manje, lapha kufanele ufake igama lakho Okokuqala futhi Isibongo esikhaleni esinikeziwe bese ucindezela “Olandelayo”.
Manje, kufanele ukhethe Izwe / Isifunda ningabakaKristu futhi ukhethe Ukuzalwa yakho usuku bese ucindezela “Olandelayo”.
Ekugcineni, kuleli khasi kufanele ufake izinhlamvu ozibona esikhaleni esinikeziwe ngokucophelela bese ucindezela “Olandelayo” inkinobho.
Uzobona ikhasi uthi Wamukelekile ukuba nombono ongafani ngeke. I-akhawunti yakho idalwe ngempumelelo.
Vele ulandele imiyalo ekuskrini ngokucophelela bese ufaka ebhokisini lakho lokungenayo Outlook.
QINISEKA UKUTHI ekudaleni iphasiwedi enamandla UKUSEBENZISA Case NGENHLA, Case EZINCANE, IZINOMBOLO, Nezinhlamvu ezikhethekile INDLELA ONGAZIVIKELA UKUBHEKANA YAKHO AKHAWUNTI kubaduni.
Outlook Nokunakekela Ikhasimende Yokuxhumana
Hlola ulwazi olungezansi ukuphathwa contact Outlook Nokunakekela Ikhasimende. Ukuze noma imuphi umbuzo, ungabiza on izinombolo Ukukhuluma 24/7.
Toll-Mahhala :- 1800 572 1100 /1800 102 1100 , Toll-Pay :- 080 4010 3000
Funda lesi sihloko ukuze uthole lonke ulwazi mayelana inqubo Indlela Dala i-akhawunti ye-Outlook. Hlola igxathu negxathu Umhlahlandlela bese uqedela inqubo ngempumelelo ku Ngena ngemvume-Akhawunti Up Outlook. Futhi, funda izici uthola emva ukudala i-akhawunti yakho ye-Outlook.
Nikeza impendulo futhi imibuzo usebenzisa ukuphathwa ngezansi amazwana ebhokisini. Sifuna ukunikeza isihloko engcono kuwe ngakho appreciable ngempela uma wabelana impendulo yakho. Futhi uvakashele iwebhusayithi yethu www-hotmail-com.email ukuze izibuyekezo njalo.
Filed Under: Bhalisela Tagged With: Dala i-akhawunti sinesimo sengqondo, kanjani ukwakha indlela abheka ngayo izinto, Bhalisa i-akhawunti ukuba nombono ongafani ngeke